Nagu saabsan - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Jrain FRP, oo ku taal magaalada Hengshui ee dalka Shiinaha, waa soo saare xirfad-yaqaan soo saare ka kooban badeecado kala duwan. Waxaan soo saarnay badeecooyin kala duwan oo caaga ah (fiberlass) lagu xoojiyay oo balaastig ah (FRP) laga soo bilaabo 2008dii welina waxaan ku firfircoonnahay hagaajinta badeecada, geeddi-socodka iyo horumarka suuqa.
Ilaa hada waxaan heysanaa 5000m2aqoon-isweydaarsi, oo leh mashiinka marawaxadaha, qalabka faakiyuubyada iyo wasakhaha iwm. Waxaa nalagu caddeeyey Nidaamka Maamulka Tayada ISO9001. Waxaan sidoo kale ku qalabeysan nahay sheybaar laxiriira iyo qalabka tijaabada xirfada 'FRP'. Waxaan naqaanaa lambarro badan oo caalami ah oo la xiriira ka dibna waxaan soo saareynaa alaabada ku saleysan iyaga sida ASME, ASTM, BS EN.
12-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan sameynay tobanaan kun oo alaabooyin FRP ah sida tuubbooyinka FRP, taangiyada, taangiyada, munaaradaha, daboolida, xaraashka iyo alaabada kale ee loogu talagalay. Waxaan muddo dheer la shaqeynaa boqolaal Macaamiil sida USA Crimar, GE Water, Canada Saltworks Inc., Italy Selip SPA, USA FLSmidth, Germany Aurubis.
Khibradda Jrain ee ku saabsan injineeriyada iyo waxsoosaarka FRP waxay u oggolaaneysaa inay bixiso xalal u gaar ah oo ay ku buuxiso shuruudaha saxda ah ee macaamiisha.
Maanta, Jrain waxay sii wadaa inay kordhiso awoodeeda, balaadho khadadka wax soo saarkooda, kor u qaado awoodeeda injineernimada ayna horumariso howlaheeda iyo wax soo saarkooda.
Ku soo dhawow inaad nagala soo xiriirto xalalka FRP.
Caaryada, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Dhoolatus gacmeed, Fiberlass-ka Farsamaysan,